I-Biography kunye nemisebenzi ka-Ernesto Sabato, umbhali ogqithileyo eArgentina. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Ababhali, Imbali yoncwadi, Iincwadi
U-Ernesto Sabato kwidilesi.
U-Ernesto Roque Sabato (1911-2011) wayengumbhali waseArgentina kunye nesincokoWaye wema njenge-physicist kunye nomzobi. Umsebenzi wakhe wokubhala wawenziwe kwimixholo malunga nomntu kunye nobukho bakhe. Kwelinye icala, wazinikezela nexesha lokwenza uphando kwicandelo lezenzululwazi.
Isigqibo sakhe sokushiya ifiziksi ukuze azinikele kwiileta zamenza ukuba abe ngomnye wababhali abaziwayo beli xesha. USabato waqala ukuthandwa ngo-1945 ngalo msebenzi: Inye nendalo iphela, enye yeencwadi ezilungileyo zekhulu lama-XNUMX, Umxholo wefilosofi, ukususela kuloo mzuzu ukuya phambili, impumelelo yakhawuleza.
1.2 Izifundo zeSabato
1.3 Umtshato waseburhulumenteni
1.4 Ukuzinikezela kuphando
1.5 Ukuqala koncwadi
1.6 Ungenelelo kwezopolitiko
1.7 Isabato ekhulayo
1.8 Iminyaka yokugqibela yobomi nokufa
U-Ernesto wazalelwa eRojas, eBuenos Aires ngoJuni 24, 1911, wayevela kusapho lwabafuduki base-Itali. iklasi ephakathi. Abazali bakhe: UFrancesco Sabato kunye noGiovanna María Ferrari; Wayengowokugqibela kubantwana abalishumi elinanye ababenaso isibini iSabato Ferrari.
U-Ernesto Sabato wayenemfundo egqibeleleyo ngokugqibeleleyo, ephumelela ubungcali kunye nokwamkelwa. Wayefunda kwimfundo yamabanga aphantsi kwidolophu yakowabo. Emva koko, ngo-1924, xa wayeneminyaka elishumi elinesithathu ubudala, waqala isikolo esiphakamileyo kwiColegio Nacional de La Plata. Kwiminyaka emihlanu kamva waqala umsebenzi wakhe we-physics kwiYunivesithi yeSizwe yaseLa Plata. Ngelo xesha wajoyina iintshukumo zoHlaziyo lweYunivesithi.
U-Ernesto Sabato wadibana nothando lobomi bakhe: Matilde Kuminsky Richter, ngo-1933, xa wayengumfundi waseyunivesithi kwaye wayenemfesane kubukomanisi. Emva kokuhlala kunye iminyaka emithathu, Utshatile ngokusemthethweni ngo-1936; Esi sibini sasinabantwana ababini: uJorge Federico noMario.
U-Ernesto Sabato, umbhali waseArgentina.
Emva kokufumana ubugqirha kwi-physics nakwimathematika Ngo-1937, u-Ernesto Sabato waya eParis ukuya kwenza uphando lwe-athomu kwi-Curie Institute emva kokuphumelela. Ukuhlala eFrance kwavula iingcango zokuziqhelanisa; unyana wakhe wamazibulo uJorge Federico naye wazalwa.
Ngasekupheleni kweminyaka yoo-XNUMX, waya e-United States ukuya kusebenza eMassachusetts Institute of Technology.Emva konyaka wabuyela kwilizwe lakhe. Ngenye imini eArgentina uSabato wagqiba kwelokuba abeke i-physics ecaleni ukuze azinikele kuncwadi, kodwa ngaphambi koko wafundisa kwiDyunivesithi yaseLa Plata.
Uthando lukaSabato loncwadi lwaqala ukwenzeka ngeminyaka yoo-XNUMX, xa wayeqala ukubhala amanqaku kwiimagazini ezinje: on y Ezi. Ngo-1945 umsebenzi wakhe wokuqala osihloko sithi Inye nendalo iphela, apho isayensi kunye netekhnoloji yayiyeyona mxholo uphambili.
Emva kweminyaka emithathu, ngo-1948 inoveli engumfuziselo kakhulu yomsebenzi wakhe, Itonela, yapapashwa kumaphepha e- Mazantsi. Unyango lwengqondo yenoveli lwazisela umbhali waseArgentina uphononongo olulungileyo, yile ndlela akwazi ngayo ukuzidibanisa kunye nehlabathi leeleta.
USabato ebenenxaxheba kwezopolitiko kwilizwe lakhe, phakathi kwabo ebambe isikhundla sokuba yintloko yezobuDlelwane beNkcubeko ngo-1958. Obunye ubuso bePeronism, ileta evulekileyo eya kuMario Amadeo ukwala kwakhe owayesakuba ngumongameli uPerón, kunye novelwano kumfazi wakhe uEva.
Umsebenzi wokubhala ka-Ernesto yayisoloko ikhula, ngo-1961 wapapasha Ngaphezulu kwamagorha namangcwaba inoveli icon ifunyenwe phakathi ezona ncwadi zibalaseleyo kuncwadi lwaseLatin American. Kwakukho izilingo ezininzi ezaye zongezwa emsebenzini wakhe; Wayephumelele amabhaso aliqela, phakathi kwabo iCervantes ngo-1984.
Iminyaka yokugqibela yobomi nokufa
Iminyaka yokugqibela yobomi bakhe umbhali uchithe enikezelwe kwimibhalo yakhe kwaye efumana amabhaso. Phakathi kwemisebenzi yakhe yamva nje: Ngaphambi kokuphela y Ukuxhathisa. Ngo-1990, eneminyaka engamashumi asixhenxe, watshata neqabane lakhe lobomi, uMatilde, ecaweni.
Ngo-1995 wehlelwa sisibetho sokuphulukana nonyana wakhe omkhulu uJorge kwingozi yemoto. Ngokwemvelo ukutyhubela iminyaka, impilo yakhe yawohloka kwaye U-Ernesto Sabato usweleke ngo-Epreli 30, 2011 kwilizwe lakhe lokuzalwa, Kwiminyaka engamashumi alithoba anesithoba ngenxa ye-bronchitis.
U-Ernesto Sabato kwilayibrari yakhe.
Malunga namaqhawe namangcwaba (1961).
Abaddon umtshabalalisi (1974).
Inye nendalo iphela (1945).
Amadoda kunye neegiya (1951).
Umbhali kunye neziporho zakhe (1963).
Phakathi kweleta kunye negazi (1988).
Ngaphambi kokuphela (1998).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » I-Biography kunye nemisebenzi ka-Ernesto Sabato
Iphepha elihle kakhulu lindincede kakhulu kuphando ndiyakuvuyela kakhulu, enkosi. Ndiza kuyishiya i-imeyile ukuze undithumele amanye amaphepha ngolu hlobo nceda :)
Indlela yokubhala inoveli: isimo sengqondo sombhali wenene